NGWỌTA NYOCHA - ISIOKWU - 2019
Nchịkọta zuru ezu banyere otu esi eme mwepụ na ọgwụgwọ nje na kọmputa. Na ọgwụgwọ nke ngwa ngwa flash maka nje virus, iji antiviruses wepụ malware na akwụkwọ ntuziaka ndị ọzọ metụtara ikpochapụ nje.
Ihe kacha mma antivirus maka Windows 10 (akwụ ụgwọ na n'efu)
Ngwa kacha mma maka iwepụ malware na kọmputa gị
Esi ewepu mgbasa ozi na mmapụta nchọgharị
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ya onwe ya na-emepe nchọgharị na mgbasa ozi
Ejiri Google Chrome malware wepu ya
Jiri RogueKiller ịchọta ma wepu mmemme obi na achọghị.
Otu esi eji Defender Defender Defender (Defender Defender Offline)
Bitdefender Free Edition Free Antivirus maka Windows 10
Esi wepu funday24.ru na smartinf.ru
Kedu ka ị ga-esi gụọ faịlụ maka nje virus na netwọk na Kaspersky VirusDesk
Isi nke 360 ​​Total Antivirus Nchebe - antivirus kachasị mma maka ule dị iche iche.
Edebela faịlụ gị - otu esi wepu nje ma wepụ faịlụ
Kacha mma antiviruses 2014 (ugwo na n'efu)
Esi lelee akara nke nchọgharị na mmemme ndị ọzọ
Enweghị m ike ịkpọtụrụ. Esi na kọntaktị iji wepu nje virus
Esi wepụ Pirrit Suggestor site na komputa gị ma wepu mgbasa ozi gbasaa na saịtị
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na nje virus dị na kọmputa (maka mmalite)
Ikpuchi windo ụgbọala site na nje - ọtụtụ ụzọ iji chebe USB USB site na malware
Esi ike iṅomi kọmputa gị maka nje virus n'ịntanetị
Esi esi iṅomi faịlụ maka nje tupu ibudata
Otu esi edozi faịlụ ndị agha ma ọ bụrụ na ọ na-ata ahụhụ site na nje
Enwere nje na Android, Mac os X, Linux na iOS?
6 nchedo kọmputa
Esi lelee faịlụ ma ọ bụ weebụsaịtị maka nje virus na ntanetị na VirusTotal
Mgbe o wepụsịrị nje ahụ, desktọọpụ adịghị arụ ọrụ na Windows
Esi wepu Mgbesomehp.com site na komputa gi
Esi wepu antivirus
Esi ewepụ PC Avast Antivirus site na PC
Esi wepu Kaspersky Anti-Virus
Esi ewepu ESET NOD32 antivirus ma ọ bụ Smart Security
Achọrọ m antivirus maka gam akporo?
Ụdị nsụgharị nke antiviruses
Isi nke antivirus Bitdefender Internet Security 2014
A na - egbochi Windows - esi ewepụ nje ahụ
Yandex dere Oh
Enweghị m ike ịga na saịtị Vkontakte - ntụziaka zuru ezu banyere ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga na kọntaktị
Enweghị m ike ịga ụmụ klas gị, ekpochi akwụkwọ ahụ
Otu esi wepu banner site na desktọọpụ - ọtụtụ ụzọ wepu sistemụ SMS site na desktọọpụ site na iji ndekọ, disks disks liveCD, na-eji ọrụ ịmeghe site na koodu. Wepu ọkọlọtọ na-egosi n'ihu ibu Windows
Esi ewepu ọkọlọtọ na ihe nchọgharị - wepu ọkọlọtọ nke na-egosi na ibe na saịtị niile, na-egosi na ịbanye na saịtị ahụ ka egbochiri, ịkwesịrị imelite opera ma ọ bụ igosi mgbasa ozi iwe.
Ụzọ ọzọ iji wepụ ọkọlọtọ
Esi weghachite mmalite Windows mgbe i wepụsịrị ọkọlọtọ - ntụziaka na ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na agbanyechara ọkọlọtọ ka egbochiri kọmputa ahụ, kama ịnọ na desktọọpụ ị na - ahụ ihuenyo n'enweghị
Akpa niile na windo oku aburula mkpirisi - nje virus nke ozo, nke onye ọrụ ahụ na-ahụ ụzọ mkpirisi kama nchekwa na windo ma ọ bụ disk diski nke nwere ike iwepu, nchekwa na-enweta ihe ezoro ezo na usoro njirimara ndị na-adịghị ewepụ
Ọrụ Ịntanetị na Skype, na ibe adịghị emepe ma ọ bụ mepee naanị na Internet Explorer - nsogbu nkịtị mgbe ibe adịghị emeghe na nchọgharị, dị ka oge echere agafeela. Na nke a, Intanet na-arụ ọrụ, Skype na ICQ jikọtara.
Free antiviruses - nyochaa nke free antiviruses na ha uru na ụkọ ihe. Arụmọrụ na iji ya mee ihe. Njikọ ibudata antiviruses maka n'efu.
Otu esi enweta nje na Intanet - nkọwa nke ụzọ kachasị esi gbasaa malware, trojans, nje site na ihe nchọgharị.
Esi ewepu Webalta - ntụziaka zuru ezu banyere otu esi ewepụ ihe dịka Webalta ma weghachite ihu mmalite mmalite nchọgharị.
Esi wepu Mobogenie site na komputa - ihe Mobogenie bu na otu esi wepu ya kpamkpam.
Otu esi ewepu mmalite peeji nke Conduit - ntụziaka zuru ezu banyere otu esi ewepu Conduit na nchọgharị dị iche iche.